यसरी हेर्नुस कक्षा १२को रिजल्ट – Paluwa Khabar
सोमबार , कार्तिक ८, २०७८
यसरी हेर्नुस कक्षा १२को रिजल्ट
माघ ५, २०७७ सोमबार 28
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा एक साताभित्र प्रकाशित गर्ने भएको छ । बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले नतिजा प्रकाशनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपालसँगको अन्तर्क्रियामा उनले विद्यालयबाट प्राप्त नतिजाको डाटा इन्ट्री गरेर रुजुको काम भइरहेको बताए । माघ पहिलाे हप्ता भित्र नतिजा प्रकाशन को तयारी भैरहेको समेत जानकारि प्राप्त भएकाे छ ।
प्रकाश राई । घर भोजपुर । हाल भक्तपुरमा बस्दै आईरहेका उनी र उनको श्रीमतीमाथि प्रहरीले नै गर्यो यस्तो घि’नला’ग्दो व्य’वहार । उनले सुनाए त्यो रातको घि’नला’ग्दो र कसैले पनि सोच्नै नसक्ने पि’डाको कुरा ।
म र मेरी श्रीमती काम गरेर थाकेका थियौं । उनी भुसुक्कै निदाईन् । म भने यहाँको सामानाको चौकीदारी गर्नु पर्ने भएको हुनाले एक रा’उण्ड ल’गाउन गएको थिएँ ।
त्यत्किैमा याहाँ खाना पाकउने एक जना दाईले मलाई ह’स्यांग फ’स्यांग गर्दै बोलाउनु भयो ।
यतिसम्म भन्दा पनि प्रकाशले अकमाईरहेका थिए । तर पनि उनले आफ्नो पि’डा त कसैलाई भन्नै पर्ने थियो ।
त्यसैले उनले हिम्मतका साथ यसरी भने,‘जब म आएँ तब त्यो मान्छेको माथिको लुगा सबै ठीक थियो ।
तर तलको चाही घँुु’डासम्मै फु’केको थियो । अनि मेरो श्रीमतीको पनि त’लको लु’गा फु’काले’र तल घुँ’डासम्म नै ल्याएर………..थियो ।
आफ्नै श्रीमतीको यस्तो कुरा कुनैपनि श्रीमानले कसैको पनि सामुन्ने भन्न सक्दैन । तर प्रकाशले त हिम्मत गरे ।
उनले अगाडी घटनाको विषयमा यसरी भन्दै गए,‘त्यत्ति छिट्टै त उस्ले गरेको होईन होला तर जे होस् गर्ने कोशिश गर्दै गर्दा म आईपुगें ।
उस्ले त्यस्तो गर्दासम्म मेरो श्रीमती निन्द्रामै थिई । उ धेरै थाकेको पनि थिई ।
प्रकाशको भनाई अनुसार उनको श्रीमतीलाई त्यस्तो गर्ने त्यो व्यक्ति उनले काम गर्ने ठाउँमा सिविल ड्रेसमा आईरहने प्रहरी हो रे । त्यसरी आउने क्रममा सामान्यत कुराकानी कुराकानी हुने गथ्र्यो ।
तर त्यो व्यक्तिले त प्रकाशको अवस्था देखेर त्यस्तोसम्म गर्न भ्याएछ ।
यो समाचारको भिडियो यो तल राखिएको न्युजको तल छ थोरै तल झरेर पुरा भिडियो हेर्नुहोला ।
प्रहरी आएर क’पडा खो’लि श्रीमती माथि च’ड्दै गरेको देखेपछि श्रीमानले जे गरे ….(भिडियो सहित) यो पनि
नयाँ दिल्ली: दहेज एउटा प्रचलन हो जुन समाजको लागि श्राप हो। यसको बाबजुद पनि, मानिसहरूले यस अभ्यासलाई लामो समयदेखि जीवित राख्दै आएका छन्, आज दहेज सम्बन्धी एक धेरै चौंकाउने घ टना बाहिर आएको छ। दा इजो सम्बन्धित यो घ टनाको बारेमा सुने पछि तपाईको र गत पनि उ म्लनेछ। जहाँ एक महिला केहि महिना अगाडि बिहे गरेर सासु-ससुरामा आई। सासु ससुरा आएको केही दिन सम्म सबै ठीक थियो, तर केही दिन पछि ससुरालीहरूले उनलाई दहेजको आ रोपमा केटीमाथि द बाब दिन थाले। ****सुदुर समाज ****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस******
गाउँका सरपंच हरप्रीत सिंहका अनुसार उनका काका हरजीत सिंहकी छोरी मनजित कौरको २२ अक्टुबर २०१ 2017 मा सिमरनसँग विवाह भएको थियो। विवाहको समयमा, मनजीतका बुबाले आफ्नो स्थिति अनुसार केटाहरूलाई दहेज दिए। दहेज लिइसकेपछि केटाहरू त्यसबेला विवाह गर्न राजी भए। विवाह गर्न सहमत भएपछि, दुबैको बिवाह निकै धुमधामको साथ सम्पन भयो। विवाह सकिसकेपछि उनका ससुरालीहरूले फेरि दहेजको लागि मनजितलाई सताउन थाले।
भनिन्छ कि यो दहेजको का रण हो कि मन्जितका सासु-ससुराले उनलाई ल्याएको दिनमा उनलाई कु टपिट गर्थे। यदि मनजितका बुबा हरप्रीतले विश्वास गरे भने विवाहपछि मन्जितका ससुरालीहरूले हरप्रीतलाई आफ्नी छोरीलाई फिर्ता लैजान वा पैसा र दहेजको माग पूरा गर्न धेरै पटक बोलाउँथे। तपाईंलाई थाहा छक्क लाग्नेछ कि मञ्जित जसको साथ विवाह भएको थियो केटो सेनामा कार्यरत छ। सेनामा भए पनि केटाले आफ्नी पत्नी र बुबालाई जबरज’स्ती दहेज दिन लगाए।
छिमेकीहरुका अनुसार यो भनिएको छ कि मनजितको पति दुई दिन अगाडि उनको घरमा आएका थिए। घर आइसकेपछि ऊ आफ्नी श्रीमतीसँग झगडा गरिसकेपछि फेरि आफ्नो काममा फर्कन्छ। तर भोलिपल्ट उसकी छोरीले उनलाई बोलाएर उनका ससुराले उनलाई कुटेको बताइन्। यदि उनीहरूले चाँडै कुनै पनि मद्दत प्राप्त गरेन भने, तिनीहरू मार्नेछन्। छोरीको कुरा सुनेपछि उनका बुबा हतारिएर छोरीको घरमा पुगे।*******थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’******
छोरीकोको घरमा पुगिसकेपछि मनजीतका बुबा तेत्ताको सोच्ने नसक्ने दृश्य देखेपछि बे’होस भए। मनजीतका बुबाका अनुसार उनकी छोरीको ला स स सुराको घरको लबीमा रहेको भेटियो। आफ्नी छोरीको लाबमा पसेको देखेपछि उनले पुलिसलाई घ टनाको बारेमा जानकारी गराए। त्यसपछि पुलिस घ टनास्थ लमा पुगे र म ञ्जितको ला स आ फ्नो क ब्जामा लिए र उनका पो’इलि बिरुद्ध मु द्दा हा’ले। पुलिसमा घटनाको रि’पोर्ट दर्ता गराएपछि उनका त्यो घरमा सबै घर छोडेर भागेको छन – एजेन्सी हिन्दिबाट साभार’
***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****,
Prevथपियो बर्जपात भर्खरै विमान दु’र्घटना हुँदा १४ जनाको मृ’त्यु – मनमा माया भए #RIP लेख्नुहाेस्!!
Nextमाघ ०६ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
एक पटक पढ्नुहोस्,महिनावारी भएको बेला पुजापाठ गर्न, मन्दिर जान हुन्छ कि हुँदैन ?
ओलीको बहुमत गुम्यो, राजीनामा या विश्वासको मत ?
मनोकामना माइको दर्शन गर्दै माघ ०७ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस भेटी स्वरुप एक सेयर गर्नुहोस
एक्कासी फेरी लकडाउन हुने मिती तोकियो, यति गतेबाट पुन देशमा लकडाउन सुरू हुँदै (564)
आजदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, कस्को कति तलब वृद्धि ? (362)
शिक्षकले राजनीति गरे जागिरै चट् पार्ने गरि यस्तो बन्यो कानून , पढ्नुहोस कानुन? (362)
माओवादी केन्द्रमा भुइँचालो , सोह्र सांसद एमालेमा प्रवेश ! नामावली सहित (360)
भर्खरै बिमान दु’ र्घटना हुँदा प्रधानमन्त्री सहित ११ जनाको मु’ त्यु , मनमा माया भए RIP लेख्नुहोला (353)
मास्टर माइन्ड प्रचण्डलाई देउवाले दिए सरकारको सबै जिम्मा, माओवादीबाट नयाँ राष्ट्रपति को ? (343)
अब बालबालिकालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ शैक्षिक भत्ता, यसरी प्राप्त गर्नुहोस्? (293)
पर्यटनमन्त्रीमा प्रेम आले (290)
७६ मा किनेर १३० मा बेच्दा पनि नेपाल आयल निगम नि’रन्तर घा’टामा कसरी जान्छ ?
पाँच दिनदेखि सुत्केरी ब्य’था लागेकी महिलाको उ’द्धार
इटहरीमा बेहुलाबेहुली सहित चार जना प’क्राउ
दाङमा बस दु’र्घटना, सहचालकको मृ’त्यु, २१ जना घा’इते यसरि भयो दुर्घ’टना
म मेरै कार्यकालमा नेपाल लाई बिकास गरेर सिंगापुर बनाउँछु : रामकुमारी झाँक्री
१.	बि’चरी मञ्जु ! अन्तिम प्रा’ण जाने बेलासम्म पनि आमासँग फोनमा बोलिरहेकी थिइन् (भिडियो (62)
२.	अब खाडी धा’उन पर्दै’न देशभित्रै ४०/५० हजार रुपैयासम्मको रोजगारी दिन्छौ : श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (57)
३.	सबैले भा’इरल बनाइ सकेर छो’डिएका सचिन परियारको जीवन फेरि उस्तै,सबैले कमाउने भाँडो बनाएर छो’ डे क’ठै (भिडियो हेर्नुस्) (54)
४.	दक्षिण कोरियाले नया तथा कमिटेड श्रमिकको लागि जारि गर्यो नया सुचना,फोटो सहित्। (53)
५.	कुलमानको अर्को कमाल देशै भर चर्चा, अवश्य हेर्नुहोस। (51)
६.	झापाका नक्क’ली डिएसपी निलम भट्टराई सुर्खेतमा प’क्राउ (49)
७.	१८ वर्षीया किशोरी सुजितासँगै तीन जना युवक कोठाभित्र समा’तिए (49)
८.	हे भगवान यो कस्तो पि’डा दियौ ? एकै परिवारका ६ जनाको दा’हसंस्कार (49)